admin | Nepali Articles
कुलचन्द्र वाग्ले – विद्वेषविरुद्ध साहित्य
(मधुपर्क २०६५ चैत)
नेपालको साहित्यले अब विद्वेशबिरुद्ध जुर्मुराउनुपर्ने भएको छ । धेरै विषयमा नेपाली साहित्य बोलिसक्यो । वादहरूमा नेपाली साहित्य प्रकट भयो । राजनीतिलाई पनि नेपाली साहित्यले पच्छ्यायो । स्वच्छन्दता र स्वतन्त्रतालाईसमेत यो साहित्यले भरपूर प्रयोग गरेको छ । विश्व साहित्यसँग कुमजोरी खेल्न सक्ने भएको मानिन्छ हाम्रो नेपाली साहित्य । गरिवका विषयमा लेखेको छ, अमिर र फकिरहरू पनि यो साहित्यमा भेटिन्छन् ।
बौद्धिकता पनि, अनि वैचारिक र श्रम पनि, मनोरञ्जन र प्रकृति प्रेम पनि । प्राचीन होस् कि अर्वाचीन, पौराणिक वा ऐतिहासिक नै किन नहोस् । काल्पनिक र तार्किक वा यथार्थवादी, सबै सबै विषयमा बोलेको छ नेपाली साहित्य । घटना र इतिहास वा पुराणका उपविज्य विषयलाई पनि नेपाली साहित्यले आफूमा समाविष्ट गरिसकेको छ । यावत् विषय र प्रसङ्ग अन्तरनिहित गर्दै नेपाली साहित्यले सगरमाथाको उचाइसँग प्रतिष्पर्धा गरेको छ । विश्वसाहित्यको मझेरीमा घुम्टो उघारेर आफ्नो परिचय दिन नेपाली साहित्य ताते होइन, ठम्ठमी हिड्न थालेको छ ।
तर जसरी नेपाली राजनीतिको उकुसमुकुसमा एउटा भयानक सङ्क्रमणको कालखण्डका अघिल्तिर मुलुक यतिबेला उभिएको छ, त्यसरी नै नेपाली समाज पनि सङ्क्रमणको हुस्सुमा भौँतारिएको जहाजजस्तै गन्तव्य भेटिने लालसामा चक्कर काटी रहेको छ । यो गन्तव्य कसरी भेटिने हो, ठोकुवा गर्ने अवस्था देखिदैन । नेपाली साहित्यसामु पनि यही भयानक चुनौती उपस्थित भएको छ । धेरै विषयमा बोलिसकेको नेपाली साहित्यले यो चुनौतीको सामना गर्नैपर्ने भएको छ ।
साहित्य समाजको ऐना पनि मानिन्छ । व्यक्तिको भोगाई र रोजाई पनि हो साहित्य । समाजलाई दिग्दर्शन गर्ने, सही बाटो देखाउने र कोही नपुग्ने ठाउँमासमेत पुग्ने क्षमता राख्छ भनी साहित्यप्रति गौरव गरिन्छ । हो पनि, मानव सभ्यताले भाषाका माध्यमबाट प्राप्त गरेको प्रथम र अन्तिम उन्नत विधि हो साहित्य ।
सन्दर्भहरू पछि विषयतर्फ लाग्दा, गौरवशाली नेपाली साहित्यले यतिबेला भन्नोस् वा अब विद्वेषविरुद्ध जेहाद छेड्नुपर्ने भएको छ । विभाजन र विखण्डनविरुद्ध हार्दिकता बोल्नुपर्ने भएको छ । हो, नेपाली समाजमा विद्वेष फैलाउने, विभाजनका गम्भीर रेखाहरू कोर्ने र विखण्डनको अँध्यारो गल्ली बनाइदिने प्रयत्न भएको छ । अहिले सबैले अनुभूत गरेको कुरा हो, विविधतामा बाँचेको नेपाली समाजलाई क्षेत्रीयता, जातीयता र धार्मिक अन्धविश्वासतिर घसेट्न खोजिएको छ । एनजिओ र आइएनजिओहरू, तथाकथित धार्मिक व्यापारीहरू र राजनीतिको अराजनीतिक निकृष्ट स्वार्थलिप्सा बोक्नेहरू साखुल्ले भएर निर्दोषहरूका बीच भ्रम छरिरहेका छन्, विभेद र साम्प्रदायिकताको विष -विष कुम्भ पयो मुखम्), भने झैं छरिरहेका छन् । समय र समाजको भाषा बोल्ने नेपाली साहित्यले हो यतिबेला यो सानो तर विविधताले पूर्ण मुलुकमा छर्न खोजिएको भ्रम वा विखण्डनको यस्तो रहस्यलाई चिर्नैपर्ने भएको छ, निरुत्साहित गर्नैपर्ने भएको छ । अन्यथा भविष्य नेपालीहरूको मात्र होइन, नेपालको साहित्यको पनि अन्धकार नै देखिन्छ ।
विश्वको विश्वास हो, साहित्यले समाजलाई समाल्न सक्छ र समात्न पनि । धेरै कुरामा टुक्रिएको जस्तो लाग्ने यतिबेलाको नेपाली समाजलाई सहभावमा समात्नु परेको छ, समाल्नु परेको छ । यो भूमिका अब बढी साहित्यले नै निर्वाह गर्नसक्छ, गर्नुपर्छ । किन कि विभिन्न स्वार्थहरूको पाइप लाइनबाट बटारेर राजनीतिले ल्याएको अराजक विभेद निवारणका लागि सहायक अब साहित्यमात्र जीवित छ, जो प्रभावकारी पनि हुनसक्छ । जातिमा बाँडिएको, क्षेत्रमा खुम्चिएको र धर्ममा साँघुरिएको, हुँदाहुँदै भाषासँग इष्र्या उत्पन्न गरिएको अर्थात् मानिसलाई पूर्ण मानिस होइन, अर्ध, आंशिक वा अपूर्ण मान्छे बनाउन खोजिएको यो बेला नेपाली साहित्य अन्यायका विरुद्ध, विभेद र विखण्डनका विरुद्ध, विद्वेष वा शत्रुभावका विरुद्ध अनि पिछडिएकाहरूको उत्थान र समर्थनमा सिङ्गो नेपाली हार्दिकतामा बोल्नुपर्ने भएको छ । त्यस्तो हार्दिकतामा न जाति मात्र हुन्छ, न धर्म नै वा न क्षेत्र मात्रै पनि । त्यहाँ त सिङ्गो नेपाल र नेपाली भेटिन्छ, कलमको निबले ताप्लेजुङ र दार्चुला लेखिन्छ अनि प्रत्येक नेपालीको पाइला पश्चिम-पूर्व, उत्तर-दक्षिण यो भूमिमा समानरूपमा हिँडिन्छन् । यदि नेपाली साहित्यले अब पनि यो विषय बोलेन भने, बोलिदिने कोही छैन ।
नेपाली समाजमा पन्पिदै गएको वा पन्पाइदै फैलाउन खोजिएको विद्वेषप्रति समग्र लेखनजीवी वा कलमजीवीहरू, ती साहित्यकार हुन् अथवा पत्रकार नै पनि जाग्रत हुनुपरेको छ, सचेत हुनुपरेको छ । विद्वेषविरुद्ध सक्रिय हुनुपरेको छ । अन्यथा ? यो प्रश्नप्रति नेपालको साहित्य, त्यो जुनसुकै भाषा र भावमा लेख्ने साहित्यकारहरूले एकैछिन गम्भीर भएर सोचिदिए एउटा विद्रुप भविष्य आँखा अगाडि ठोकिने छ । यी पङ्क्तिलाई धृष्टता नमान्ने हो र साच्चै भन्ने हो भने, यदि अर्ति र उपदेशको अर्थमा नबुझ्ने र लेखाइको हार्दिकता बुझिदिने हो भने यतिबेला नेपाली साहित्यका सामु अरू कुनै वाद भन्दा विद्वेषविरुद्धको वाद एकमुष्ट बोल्नुपर्छ । नेपाली समाजलाई बचाइराख्न पनि यस्तो साहित्यवादको खाँचो भएको छ ।
त्यसो त साहित्य सीमाहीन र स्वतन्त्र विषय हो । तर साहित्यसँग पनि मुलुकले कुनै गम्भीर अवस्थामा सीमा केन्दि्रत अपेक्षा गर्ने रहेछ । यही सन्दर्भमा अहिले नेपालले विद्वेषबिरुद्ध साहित्यवाद मागेको देखिन्छ । त्यसो त विद्वेषविरुद्ध राजनीतिकवाद पनि उठ्नुपर्ने हो, नागरिकवाद पनि जाग्नुपर्ने हो । यिनीहरू जे गरुन्, तर यस कालखण्डमा उब्जाउन खोजिएको विद्वेषविरुद्ध लेख्न एवं बोल्न, ‘आऊ समाउ कलमहरू’ भन्ने आव्हान नेपाली साहित्य समाजले गर्नैपर्ने भएको छ । नेपाली कलमहरू जुर्मुराउनु अत्यावश्यक छ ।
Tagged bidwesh kulchandra wagle lekh literature madhuparka nepali article sahitya
कुलचन्द्र वाग्ले – संविधानमा साहित्य
(मधुपर्क २०६६ बैशाख)
अब बन्ने लोकतान्त्रिक संविधानमा साहित्यको स्थान र मान के हुने ? यसका लागि बोलिदिने कसले ? सङ्घीय संरचनामा मुलुकको रूपान्तरण हुँदा साहित्यको सङ्घीय स्वरूपको विस्तार र स्थापना कसरी हुनसक्छ ? साहित्य स्वयंमा सिर्जना हो, त्यो प्रतिकूल र अनुकूल दुवै अवस्थामा प्रस्फुटित, विकसित र विस्तारित हुन्छ । यही मान्यतालाई आत्मसात् गरेर निस्पृह रहने हो भने पनि साहित्य त ढुङ्गाको काप फोरेर पनि उम्रन्छ पीपल, भनेझैँ उमि्ररहने छ । यसको गति जुनसुकै शैलीमा होस् भइरहने छ तर अवरुद्ध भने हुने छैन । यसो भन्दैमा साहित्यको स्थान र मानको खोजी वा स्थापना हुनुपर्छ कि पर्दैन ? पर्छ भने यसका लागि बोलिदिने, लेखिदिने कसले ? के राज्यको यस विषयमा जिम्मेवारी हुन्छ वा हँुदैन ? झन् प्रादेशिक अवधारणामा साहित्यको पनि प्रादेशिक विभाजन हुने हो वा केन्द्र र प्रदेशहरूले साहित्यका लागि गर्ने के ? सायद यस्ता विषयमा साहित्यिक क्षेत्र, साहित्यकार र साहित्य अनुरागीहरूले सोच्नुपर्छ ।
यतिबेला सबैले आ-आफ्नो पहिचान र अस्तित्व खोजेको सन्दर्भ छ । साहित्यकार समयसँगै एउटा खास भूमिमा जन्मन्छ । मानिसका रूपमा उसको भूगोल र भाषाको सीमा हुन्छ तर सीमाबद्ध त्यही मानिसबाट सिर्जित साहित्य सीमाहीन, अनन्त र स्वतन्त्र रहन्छ । सम्झनाका लागि, झण्डै चार सय वर्षअघिका बेलायती साहित्यकार विलियम शेक्सपियरतिर फर्कियौँ भने तिनका सिर्जनाले समय र भूगोलको दुवै सीमालाई उल्लङ्घन गरेका छन् । साहित्यिक व्यक्तित्व सीमा सङ्कुचनमा अड्दैन भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । दुनियाँका धेरै जातजाति एवं कृत्य र कर्ममा जुन प्रकारको विविधता छ, त्यो विविधताभित्र साहित्यले कर्मको हैसियतमा एउटा अलग्गै अर्थात् सर्जक भनिने जात वा जातिको प्रतिनिधित्व गर्छ । औजार कलम र विचार एवं कल्पनामा खेल्ने, जीवन र जगत्लाई उद्घाटित गर्ने, भोगाइ, रोजाइ एवं दुःखाइजस्ता असीमित विषयमा पनि अभिव्यक्त हुने, मूर्त-अमूर्तको शील्पकार हो सर्जक, अनि सिर्जना । जो अक्षरहरूको प्रतीक र प्रतिबिम्बमा उद्भाषित हुन्छ, पर्छ वा प्रविधिमा त्यसको अङ्ग, अनुहार देखिन्छ ।
यस्ता यथार्थहरूका बीच पनि साहित्यको उत्थान, विकास र विस्तारमा राज्यको दायित्व हुन्छ कि
हुँदैन ? जरुर हुन्छ तर त्यसको खोजी गर्ने कसरी, कुन बेला, कसले ? हो, साहित्यले संरक्षण चाहँदैन र खोज्नु पनि हँुदैन । साहित्यकार विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको-साहित्यले संरक्षण होइन, स्वतन्त्रता चाहन्छ, भन्ने विचारसँग असहमत हुनुपर्ने कारण छैन, किन कि उहाँ थप भन्नुहुन्छ- साहित्यमा सम्राट् पनि नाङ्गै हुन्छ । यसबाट बुझिने कुरा राज्यले संरक्षण वा सीमा होइन, साहित्यको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई सम्मान र सघाउ पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने नै हो । त्यो कसरी ?
नेपाल यतिखेर संविधान निर्माणको प्रक्रियामा छ । सबै पहिचानको खोजीमा छन् । पहिचान खोज्दा पहिचान खोज्ने ठाउँ नै नरहने अवस्था नआओस् भन्ने सबैले सोच्नैपर्छ । पहिचान खोज्ने माटो रहँदा मात्र त्यस्तो खोजी सार्थक हुन्छ । यही सन्दर्भका बीच साहित्यले आफ्नो स्थान, मान किन नखोज्ने ? प्रश्न सजिलो छ तर प्रक्रिया जटील हुनसक्छ । केन्द्र र -प्रस्तावित) सङ्घहरूले साहित्यका प्रति कस्तो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ ? यस विषयमा संविधानले निर्देश गर्न जरुरी छ र साहित्यिक क्षेत्रले बहस र मागसमेत गर्नुपर्छ ।
साहित्यले सीमानिहीत संरक्षण खोज्ने नै होइन । स्वतन्त्रता र सम्मान भने छोड्नु हँुदैन । यसका लागि राज्यले धेरै कामकुरा गर्नसक्छ । जस्तै नेपालले साहित्यिक क्षेत्रको विश्वस्तरीय पुरस्कार र सम्मान स्थापना गर्नसक्छ । यदि त्यसो हुन नसके एसिया वा दक्षिण एसियालाई सम्बोधित गर्ने पुरस्कार हुनसक्छ । अर्थात् विदेशीलाई पनि आकषिर्त गर्ने काम राज्यले चाहृयो भने साहित्यिक क्षेत्रमा गर्न सकिन्छ । मुलुकभित्र पनि यस्ता कार्य हुनसक्छन् । अब नेपाल र नेपालीको सम्पर्क भाषामा नेपाली नै स्थापित भइसकेको छ । यसमा कञ्जुस्याइँ गर्नुको अर्थ छैन तर राज्यले नेपालका अन्य भाषा, भाषिका सम्बद्ध साहित्यको विकास एवं विस्तारमा पनि ध्यान दिनैपर्छ, योगदान पुर्‍याउनै पर्छ । यस्तो कुरा गरिरहँदा, एकातिर स्वतन्त्रता र सम्मानको कुरा, अर्कोतिर राज्यसँग पुरस्कार र सम्मानको माग गर्ने ? कतै विरोधाभाष भयो कि ? यस्तो लाग्न सक्छ तर यी कुरा समानजस्ता भएर पनि भिन्न छन् । यस्तो काम राज्यले गर्ने तरिकामा निर्भर रहन्छ ।
प्रज्ञा-प्रतिष्ठानहरू छन् । तिनलाई स्वायत्त एवं स्वतन्त्र बनाउनुपर्छ । जसका लागि बहुसङ्ख्यक प्राज्ञ निर्वाचित र एक/दुई सङ्ख्या मनोनितको राख्न सकिन्छ । तिनीहरूबाटै कुलपतिलगायत सदस्य सचिवको चयन गर्ने प्रणाली विकसित गर्न सकिन्छ । राज्यले एकमुष्ठ आर्थिक सहयोग देओस् वा अक्षयकोष बनाइदेओस् तर त्यसको मूल्यमा कुनै पनि हस्तक्षेपकारी नीति नराखोस् । भाषाभाषीका साहित्यको विकासका लागि ट्रस्ट बनाएर वर्षमा विभिन्न भाषाका कमसे कम एक वा आधा दर्जन कृतिलाई प्रकाशित हुने अवसर मिलोस्, अध्ययन र अनुसन्धानवृत्ति स्थापना गरियोस् । भाषाभाषिकाको साहित्यलाई हेर्ने अलग निकाय प्रतिष्ठानअन्तर्गत राखेर राज्यले अहस्तक्षेपकारी शैलीमा साहित्यको विकासमा ध्यान देओस् ।
राज्यको सोच पुग्यो र चाहृयो भने यस्ता केही महìवपूर्ण काम गर्न नसकिने होइन । साहित्यको विकासका लागि कुनै स्वतन्त्र एवं स्वायत्त निकाय गठन गरेर यो काम पूरा गर्न सम्भव छ । तदनुरूप ऐन कानुन र नियमको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । जसका लागि संविधानमा सरकारी निकायको हस्तक्षेप नचल्ने स्वतन्त्र साहित्यिक निकायहरूका लागि आवश्यक संयन्त्र-संरचनाको प्रत्याभूति हुनुपर्छ । आवश्यक सुझाव विशेषज्ञहरूबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ तर राज्यको प्रतिबद्धता चाहियो । यसका लागि साहित्यिक क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्ति, व्यक्तित्व र संस्थाहरूको माग र सहयोग ढिला नगरी उमि्रनुपर्‍यो ।
Tagged constitution kulchandra wagle lekh literature madhuparka nepali article politics